March 13, 2018 Aagan Post0Comments
दिउसो दुई बजेर १८ मिनेटमा त्रिभुबन बिमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो ।
बिमान अवतरण गर्ने क्रममा एउटा टायरले धावनमार्ग र अर्को टायरले घासे मैदान टेकेको क्यान को महानिर्देशक ले बताउनु भयो । ७६ सीट क्षमताको दुर्घटनाग्रस्त विमानमा २८ महिला र २ जना बाललालिकासहित ६७ यात्रुहरु बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौं आएको थिए ।
३३ जना भने नेपाली रहेका विमानमा चीनका एक/एकजना, मालदिभ्स र विमानमा सवार थिए त्यस्तै बाँकी बंगलादेशी नागरिक थिए ।
नेपाली नागरिकमा सञ्जय महर्जन, प्रसन्न पाण्डे, हरिशङ्कर पौडेल, सञ्जय पौडेल, कृष्णकुमार सहनी, आश्ना शाक्य, एञ्जिला श्रेष्ठ, सरुना श्रेष्ठ, डा बालकृष्ण थापा, श्वेता थापा र अवधेशकुमार यादव शिला बजगाईं, प्रवीण चित्रकार, सजना देवकोटा, अल्जिना बराल, चारु बराल, सोबिन्द्रसिंह बोहरा, ज्ञानीकुमारी गुरुङ, श्रेया झा, पूर्णिमा लोहनी, मिली महर्जन, निगा महर्जनको दुर्घटनामा परी निधन भएको छ ।
विमानबाट उद्धार गरिएका मध्ये सिनामंगलस्थित केएमसी मेडिकल कलेजमा उपचार गरिँदैछ ।
केएमसी पुर्‍याइएका मध्ये ४ जनालाई अन्य अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । किशोर त्रिपाठी, हरिप्रसाद सुवेदी र दयाराम ताम्रकारलाई ग्राण्डी अस्पतालमा रिफर गरिएको छ भने केशव पाण्डेलाई मेडीसीटी अस्पतालमा रिफर गरिएको छ ।
← फरवार्ड माइक्रोफ़ाइनान्सले डाक्यो साधारण सभा, बोनस शेयर कति ?
एनआईसी एशिया बैंकले अधिकतम ब्याज दिने योजना स्थगित गर्ने →
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका दिननै शेयर बजार दोहोरो अंकले घट्यो
February 26, 2018 Aagan Post 0